Robben: “Waan layaabay qaabkeey u dheeshay Real” - BBC News Somali
Robben: “Waan layaabay qaabkeey u dheeshay Real”
24 Abriil 2014
Ciyaaryahanka garabka kaga ciyaaro kooxda Bayern Munich Arjen Robben ayaa sheegay in uu la yaabay qaabka taxadarka badan ee ay kooxda Real Madrid u ciyaartay, lugta hore ee nus dhamaadka koobka Horyaalada Yurub.
Inkastoo kooxda Real Madrid ay guul ka gaartay ciyaartii xalay ka dhacday garoonka Bernabeu oo ay ku adkaatay 1-0 ayaa haddana kooxda haysata koobkan loo tartamayo ee Bayern waxa ay ku tamashlaysay haynta kubada boqolkiiba 72.
“Wax badan ayaan ka filayay Real Madrid” ayuu yiri weeraryahankii hore ee Chelsea.
“Waxaan ka filayay in ay weerar adag nagu soo qaadaan, hasayeeshee waxay galeen difaac taana waxay inoo suurtagalisay in aan ciyaarta maamulno. Waana mida aan la fajacay.”
Karim Benzema, ayaa dhaliyay goolka kaliya ee ciyaarta, balse Mario Gotze iyo Thomas Muller ayaa labaduba waxa ay heleen fursado ay ku barbareyn lahaayeen kooxda Real, laakiin uma aanay suurtagalin.
Kooxda Real Madrid, ayaa sidoo kale iska khasaarisay goolal, iyadoo Cristiano Ronaldo iyo Angel Di Maria labuda uu goolhayaha Bayern ka diiday fursado wanaagsan.
“Kooxdeyda aad ayaan ugu faanayaa,” ayuu yiri tababaraha kooxda Bayern Guardiola. “Waxa ay soo bandhigeen awood la yaab leh oo ay kaga hortageen mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan adduunka. Waxay ila tahay in aan weli ka soo kabsan karno guuldarada oo aan soo bixi karno markii la gaaro lugta labaad.”
“Waxaan doonaynay in aan kubada wax badan heyno oo degdeg u ciyaarno, weerarka iyo difaacana aan isku xirno. Ciyaarta inaa maamulaynay, balse Real Madrid waxa ay sugayeen weerar celin, waxayna haystaan ciyaaryahano ku wanaagsan in ay weerar celin sameeyaan.” Ayuu yiri Guardiola.
Lugta labaad ee ciyaarta ayaa waxa ay ka dhacaysa Talaadada garoonka Allianz Arena, garoonkan oo oo laba jeer oo kaliya Bayern looga adkaaday sanadkan.
Image caption Guardiola tababaraha Bayern oo la hadlaya Robben
Guardiola ayaa intaa ku daray: “Rajadeydu weli aad ayey u sarreysaa. Weliba waxa ay ka sarreysaa sidii ay aheyd ciyaarta ka hor.”
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti, oo xilli dambe ciyaarta soo galiyay Gareth Bale oo uu hayay hergab, ayaa ku qancay sida ay kooxdiisa u dheeshay.
“Wax walba waan ku faraxsanahay, hasayeeshee ciyaartu waa ay adkeyd,” ayuu yiri. “Si wanaagsan ayaan u dheelnay, mararka qaar waa nalaga gacan sarreeyay balse weerarkeenu wuu wanaagsanaa.”
Image caption Carlo Ancelotti tababaraha kooxda Real Madrid
“Gareth Bale oo aan ciyaarta wada dheelin iyo Cristiano Ronaldo oo qeyb dheelay marka ma aanay aheyn wax fudud. Kooxdu si wanaagsan ayey u shaqeysay.”
“Lugta labaad ee ciyaarta waa mid adag; waxaanu haysanaa hogaan aan sidaa u buurneyn hasayeeshee waa in aanu u dheelnaa si ay ku jirto kalsooni oo aan soo bandhignaa sida ay nooga go’an tahay inaan guulaysano sida aan soo bandhignay maantaba. Ma ay jirto cid garanaysa waxa ka dhici doona Munich.” Ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Carlo Ancelotti, tababaraha kooxda Real Madrid.
David Moyes oo shaqada laga fariisiyay
22 Abriil 2014
Sawirro Kooxda kubadda cagta ee Soomaaliya
30 Nofembar 2013